Wholesale veneer stacker Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Iyo stacker iri neakakwirira akangwara system ayo anodzorwa ne PLC. Iyo inokwanisa kuenzanisa kumhanya kweiyo peeling muchina otomatiki nerutsigiro rwema sensors akati wandei akaiswa munzvimbo dzakasiyana kuti atarise pane veneer nguva dzose. Izvo zvigadzirwa zvisina kukwana zvinogona kurongedzwa otomatiki zvinoenderana nezvinodiwa Izvo zvine mabasa senge Kuverenga otomatiki uye kunotyisa, otomatiki kuendesa.
Pano tinokurudzira vhoriyamu adsorption mhando, asi isu zvakare tine dzakasiyana mhando senge roller kutendeuka uye kusunungura mhando uye yekurovera mhando. Vatengi vanogona kusarudza iyo inonyanya kukodzera ivo pachavo.
Iyo yekuchengetera yekuisira muchina musanganiswa mukuru weiyo peeling muchina. Inobatsira zvakanyanya kugadzirisa kugona.
Yedu sevhisi tenet - hapana muganho wenguva yebasa rako, maawa makumi maviri nemana ndizvo zvatinofanira kuvimbisa.Mureza webasa redu - Mutengi anogutsikana nguva nenguva!
Kana iwe uri kufunga kutenga chero michina yehuni, usazeze kutibata isu.
1.Vacuum adsorption modhi ine simba zvakanyanya kushambadza akasiyana ukobvu veneers zvisinei nehukuru hwepamusoro kana hwakadzika hukobvu.
2.Iyo yakaderera mhando veneer semakomba mahombe kana isina yakazara chidimbu ichagadziriswa otomatiki.
3.Otomatiki murwi unoendesa system inobatsira kuchengetedza mari yevashandi.
4.Nhanho inogona kugadziriswa zvinoenderana neyekumhanya kumhanya.
5.Otomatiki veneer kuverenga, hapana chikonzero chekuverenga nebasa.
6.Asingamiri kushanda. Kana mumwe murwi waitwa, uku uchiendesa murwi kunze kwecha stacker kuchiri kugona kuisira iwo manyowani matsva ari kuuya.
Pashure: Ukanyatsotarisisa peeling And Cutting Machine